Iwo akanakisa maguta eSpain ekushanyira nemotokari muchirimo | Kufamba Nhau
Kufamba Nhau | 30/04/2021 11:06 | Nzvimbo dzekushanya
Tora mukana wekuti kutonhora kuri kupera zvishoma nezvishoma uye tembiricha iri kudziya nekushanyira imwe ye maguta matanhatu akanakisa muSpain kushandisa zororo rinonakidza muchirimo chino.
Uye… Chii chiri nani pane kufamba nemota yedu? Isu tinosanganisa iyo matenga edenga kumotokari yedu uye kunakidzwa! Wagadzirira kutsvaga maguta epamusoro emwaka uno? Ramba uchiverenga!
5 Córdoba nemapatio ayo muna Chivabvu
Ehe saizvozvo. Madrid iguta rinoyevedza. Zvinogona kutonhora zvakanyanya munguva yechando kana uchibva kuguta rinodziya, uye zvinogona kupisa kwazvo muzhizha kana uchibva kuguta rinotonhora. Zvisinei, iyo inoberekwa patsva uye inotumbuka mukati megore. Zuva, ratodziya, rinokoka famba chinyararire mumigwagwa yayo inoyevedza nemapaki akasvibira.
Muchirimo, unogona kutora kufamba kuburikidza ne Paki yakanaka yekuzorora (kurenda chikepe pagungwa), tora bhasikoro kuburikidza neParque Juan Carlos I kana Madrid Río. Uye kana iwe uchinzwa senge kufamba, tinokurudzira kuti iwe ubhuke rwendo rweguta pane yakavhurika vashanyi bhazi kuti utore mukana wemamiriro ekunze akanaka kana kutevera nzira mumotokari yako: Yakanyanya mari uye yakasununguka sarudzo!
Uye nei zvisiri kwira pacable mota uye kuyemura guta guru reSpain kubva kumusoro, iwe uchigeza mumaranzi ekutanga ezhizha zuva?
Kana kunze kusina kupisa zvakanyanya, unogona kugara uchiita shanyira Royal Palace uye Almudena Cathedral.
Izvo zvakasiyana zveSpanish jogirafi zvinoita kuti zviome kusarudza kuti ndeipi yakanakira kuenda.
Nekudaro, isu tinosarudza the pyrenees nekuti muchirimo pachine chando pamusoro-soro soro, girini iri pachena mumipata uye mvura inosvuuka kwese kwese, ichibvumira nzizi kuyerera nesimba. Hapana mhando yefaira inodikanwa nekuti iyo minda inopisa nemaruva emusango, zuva rinoonekwa uye denga rakasvibira zvechokwadi. Mazuva anorebesa, uye zvese zvinouya pamwechete kuti zvigadzire inonakidza mamiriro.
Takanakidzwawo ne misha midiki ine dzimba dzematombo, slate mumatiles ayo uye muhari dzemaruva mumahwindo, pamwe nemigwagwa ine makakombama mazhinji uye traffic shoma.
Chitubu inguva yakanakisa yekushanyira Benidorm. Kunyangwe vazhinji vachiti zvimwe, chokwadi ndechekuti inopfuura kungova zuva uye mahombekombe.
Benidorm ine dhorobha rekare rinofamba, rine mabara mazhinji ayo Vanoshumira tapas kubva kumativi ose eSpain uye nemhepo yakakura pamatope. Mukuwedzera kune tapas nzvimbo, Benidorm ine nzvimbo dzakasiyana-siyana dzeresitorendi dzinoshanda kicheni chepasi rose kubva kunenge kona dzese dzenyika.
Iwe unogona zvakare kuenda kuMirador de Benidorm, inova imwe yezviratidzo zveguta uye inobatanidza iwo mahombekombe maviri. Kubva pane ino maonero unogona kunakidzwa nekuona kunoshamisa kwekuvira kwezuva nekubuda kwezuva.
Valencia inotigamuchira nemamiriro ekunze ane zuva, materu akamirira kuzadzwa uye akanakisa paellas ayo Spain anogona kupa, achangogadzirirwa pamatafura ekunze. Hakuzovi nevanhu vakawanda senge muzhizha, saka tichava nemahombekombe kwatiri kuti tifambe tichitevedza mahombekombe uye pamwe tichidya ice cream.
Tinogona kuenda ku Guta reZviitiko, famba-famba mutown, enda ku Botanical Bindu… Uye zvimwe zvakawanda!
Córdoba nemapatio ayo muna Chivabvu
Córdoba ndiyo inofanirwa-kuona yekuenda kuSpain muna Chivabvu, ine yayo May mayambuka uye patios, madhoo, uye orenji miti iri kubuda. Kuenzaniswa nechero imwe mwedzi wegore, guta rakashambidzwa nechiedza uye neruvara. Uye zvakare, mukati memwedzi uno makwikwi akakurumbira eMaystick anoitwa, uye dzimba dzinoverengeka dzakavanzika dzinovhura patios yavo kuruzhinji, izere nemaruva, ruzivo uye kutarisisa kune wese munhu anopfuura.
Nyika inozivikanwa Mosque-Cathedral anokusiya usina remuromo, uye kufamba-famba nepakati pechiJudha, kuravira tapas mumatavern uye uwane mamwe ematombo akavanzika eguta, akadai seViana Palace uye Alcazar Gardens, mufaro chaiwo. Guta rakadzoserwa shure nemazana emakore enhoroondo uye musanganiswa wetsika wakasiyana uyo usingazokusiye.
Sevilla inzvimbo yakanaka kwazvo panguva ino yegore yeApril Fair, inova imwe yemitambo yeAndalusian inogara kusvika chirimo. Vazhinji vashanyi vanosarudza iyo Andalusian capital yavo yekupukunyuka kwavo kwemaruva ayo anoshongedza migwagwa yayo, iyo yemafaro mamiriro evanhu vayo uye runako renharaunda.
Kushanyira flamenco inoratidza muSeville Ndicho chimwe chezviitiko zvakakosha, pamwe nekufamba kuburikidza nezvivakwa, kutora kukwira mungoro inodhonzwa nebhiza uye kuravira gastronomy yemuno. Mumazuva mashoma iwe unozogona kuziva zvese zviripo kuziva nezve guta. Rwendo rwevhiki kuenda kuSeville munguva yechirimo runoita kuti udanane neguta uye ruchakuita iwe kuti ude kudzoka chero nguva yegore.
Iye zvino unoziva maguta eSpain aunofanirwa kushanyira. Uri kuenda kupi kutanga kwako rwendo rwenzira? Rangarira kuti iwe uchafanirwa kuchinjika kumitemo yakatemwa neCovid-19 mamiriro ekukurumidzira. Tsvaga nezvemitemo yenharaunda yega yega uye unakirwe nerwendo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Nzvimbo dzekushanya » Maguta akanakisa eSpanish ekushanyira nemotokari muchirimo